'अपरिचित चीजहरू' सिजन4को पहिलो पूर्ण ट्रेलर यहाँ छ
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	पहिलो पूर्ण 'अपरिचित चीज' सिजन4ट्रेलर यहाँ छ
पहिलो पूर्ण 'अपरिचित चीज' सिजन4ट्रेलर यहाँ छ
के अलौकिक आँधीबेहरीमा छतमा इलेक्ट्रिक गितार बजाउन सुरक्षित छ?
by तिमोथी Rawles अप्रिल 12, 2022
by तिमोथी Rawles अप्रिल 12, 2022 16,113 हेराइहरू
अपडेट: Stranger Things Season4अब Netflix मा स्ट्रिम हुँदैछ
सायद यो भन्दा धेरै प्रत्याशित केहि छैन Netflix यो वर्ष सिजन चार भन्दा "अपरिचित चीजहरु।" आखिर, स्ट्रिमिङ प्लेटफर्मले हाम्रो "सुझाव गरिएको अवलोकन" कतारमा कतिवटा वास्तविक-अपराध नाटकहरू छोड्न सक्छ?
आज, हामीले ट्रेलरको रूपमा सबै क्याप्स ब्रान्डबाट थोरै उपचार पाउँछौं। यो "अपरिचित चीजहरू" को सीजन चारको लागि पहिलो आधिकारिक ट्रेलर हो, र यस्तो देखिन्छ कि स्टारकोर्ट सामरिटनहरू फेरि एकपटक खतरामा छन्, तर यस पटक, तिनीहरूको गोप्य हतियार, इलेभेन, कुनै शक्ति बिना नै गेटबाट बाहिर निस्किरहेको छ। सिजन तीन को अन्त्य।
यो स्टारकोर्ट घटना पछि छ महिना पछि छ र यद्यपि मिसफिटहरूको हाम्रो मनपर्ने कुलले आफ्नै काम गरिरहेको छ, अपसाइड डाउनको खतरा अझै धेरै वास्तविक छ र यसको पछाडिको रहस्य अझै उलगड्न बाँकी छ। हामीलाई के थाहा छ, भ्वाइस-ओभर अनुसार, त्यो हो "युद्ध आउँदैछ।" हामीलाई के थाहा छ रातो अलौकिक विद्युतीय आँधीबेहरीको समयमा इलेक्ट्रिक गितार बजाउनु भनेको धातुको व्यक्तित्व हो।
पुरानो परित्याग गरिएको हवेलीमा टिकिरहेको हजुरबुबा घडी जस्तै, फ्यानहरूले शृङ्खलाको अन्तिम घण्टा अघिको समय गनिरहेका छन्: सिजन पाँच यसको अन्तिम मानिन्छ।
तर अहिलेको लागि, रमाइलो गरौं कि हकिन्स अझै पनि नेटफ्लिक्स नक्सामा ग्रीष्म २०२२ को लागि छ र यात्रालाई "पृथक तरिकाहरू" को पूर्वनिर्धारित प्रस्तुतिको साथ अर्को ट्र्याक ग्लो अप दिइएको छ। मजा लिनुहोस्।
"अपरिचित चीजहरू" सिजन 4, भोल्युम एक मे 27 मा घट्नेछ, दोस्रो संस्करण जुलाई 1 मा।